केहीबेर खुलेको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्ड फेरि बन्द | सुदुरपश्चिम खबर
काठमाण्डौ – पहिरो हटाएर केहीबेर खुलाइएको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्ड फेरि बन्द भएको छ । बिहान केही बेर खुलेको सडक फेरि बन्द भएको प्रहरीले जनाएको छ । लगातारको वर्षाका कारण पहिरो खसिरहेकाले सडक खुलाउन समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक ओमप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।
सडक बन्द हुँदा नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्ड हुँदै आवतजावत गर्ने गाडी बीच बाटोमै रोकिएका छन् भने गाडीको लामो लाम लागेको छ । यसैबीच, पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड पनि बन्द भएको छ।नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वको कावासोती थानाचोक नजिकै बाढीले राजमार्गको ह्युमपाइप बगाउँदा राजमार्ग बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
सडकको ह्युमपाइप बगाएर बिहानदेखि अवरुद्ध भएको सडक सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग र राप्ती राजमार्गको रुकुम पश्चिम सडक खण्ड बन्द भएको छ । पहिरोले जाँदा मध्यपहाडी लोकमार्गको मुसिकोट–चौरजहारी सडक खण्ड र राप्ती राजमार्गको मुसिकोट–सल्यान सडक खण्ड बन्द भएको हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग रुकुम पश्चिम खण्डको सानीभेरी गाउँपालिकाको सुलिहाले लगायत पुर्तिमकाँडा, गिठाकोट, मुसिकोट नगरपालिकाको छिवांग लगायतका ठाउँमा पहिरो गएको छ । यसैबीच, अत्तरिया स्याले जोड्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाको एक मात्र ठूलो भीमदत्त राजमार्ग पनि पहिरोका कारण बन्द भएको छ ।
अहिले देशभरका विभिन्न १२ वटा सडक खण्ड पनि पहिरोका कारण बन्द छन् । मनसुन सुरुभएयता १०६ वटा सडकमार्ग बन्द भएकामा ५८ ठाउँका सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएका छन् । पहिरोले बन्द भएका सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । (ujyaaloonline.com बाट सभार)
शरीर कमजोर महशुस भयो ? खानुहोस् यी ५ खानेकुराहरु !!